फिचर Archives - Page 15 of 25 - Purbeli News
एकाएक दीपाश्री कसरी बनिन् स्लिम
काठमाडौं,२३ पुस । काठमाडौंमा भएको ‘सेलिब्रेटी रनवे’मा दिपाश्री निरौलाले लगाएको ड्रेसको चर्चा ब्यापक भयो । अन्य नायिकाको तुलनामा बाक्लो ज्यानकी दीपाश्रीलाई कतिपय कार्यक्रममा सहकर्मीले नै मोटी भनेर टिप्पणी गर्छन् । तर, सेलिब्रेटी रनवेमा दीपाश्री स्लिम देखिइन् । ‘हो त्यो दिन दीपा दिदी स्लिम देखिनु भएको थियो’ फेसन डिजाइनर रोजिना श्रेष्ठल...
भारतीय अभिनेता ओम पुरीका १० रोचक तथ्य
एजेन्सी। भारतीय अभिनेता ओम पुरीको ६६ बर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ । गत अक्टोवर १८ मा ६६ बर्ष पुगेका आम पुरीको हृदय घातका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ । उनले भारतीय बाहेक अन्तराष्ट्रिय स्तरका फिल्ममा पनि अभिनय गरिसकेका छन् । उल्फ, वेस्ट इज वेस्ट, गान्धी, इस्ट इज इस्ट तथा उन्यासमा आधारित फिल्म द थन्डर फूड जर्नी जस्ता हलिउडका फिल्ममा पनि ओमपुरी...
नायिका रेखा थापा भन्छिन – अामा बन्ने रहर छ छिट्टै बिहे गर्छु !
काठमाडौं। केही दिन अघि मात्रै राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेकी नायीका रेखा थापाले सन्तानको आमा हुन रहर लागेको बताएकी छिन्। उनले विवाह गर्ने समय पनि आएको र मिलेमा केही वर्षमा विहे समेत गर्ने बताइन्। दाङको घोराहीमा शनिवार भएको एक अन्तरक्रियामा बोल्दै रेखाले चलचित्रमा मात्रै नायीका बनेर महिलाको मुद्दा उठाउन कठिन हुने भएकाले राजनीतिमा आएको तर्क गरिन...
मेरी बास्सैकी निर्मली दोस्रो पटक बनिन् आमा : बाँडीन् फ्यानहरुमाझ यसरी खुशी
काठमाडौँ । हाँस्यकलाकार तथा मोडल निरु खड्का ‘निर्मली’ले दोस्रो सन्तानका रुपमा छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । आज उनले फेसबुकमा नवजात शिशु सहितको फोटो राख्दै दोस्रो पटक आमा बनेको भन्दै आफ्ना फ्यानहरुमाझ खुशी बाँडेकी छिन् । शिशुका दुई वटा तस्विर राखेकी निर्मलीले लेखेकी छिन् , ‘एउटा लामो प्रसव पीडापछि पुन: एकपटक आमा भए। हामीलाई माया गरेर ख्याल गर्नुहुने ...
जन्मदिन मनाउँदै शिल्पा : छबिले दिए उनलाई जिवनकै ठूलो उपहार
काठमाडौं, ७ पुस । नायिका शिल्पा पोख्रेल आज आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछिन् । उनले आज आफ्नो जन्मदिन मनाउन लागेपनि कतिऔँ जन्मदिन हो त्यस बारेमा भने खुलाईनन् । साढे चार बर्ष पहिलो ग्ल्यामरको दुनियामा कदम राखेकी शिल्पाले छोटो समयमा नै फिल्मी क्षेत्रमा सफलता पाएकी छिन् । हाल उनी अभिनेत्री मात्रै हैन निर्मात्री पनि बन्ने तरखरमा छिन् । निर्मात्रीको रुपमा उनले...
चर्चित सुन्दरी नायिका करिनालाई पुत्रलाभ
एजेन्सी । नायिका करिना कपुरलाई पुत्रलाभ भएको छ ।नायक सैफअली खानसँग लामो समय प्रेम सम्बनध पछि बिबाह गरेकी यि सुन्दरीले आज बिहान ८ बजे छोरालाई जन्म दिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । आज बिहानै अकस्मात पेट दुखन थालेपछि अस्पतालमा भर्ना भएकी करिनाले छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । अहिले अस्पतालमा उनका आफन्त, शुभ चिन्तक र कलाकर्मीको भिड लागेको छ । यद...
हमाल ढिकी कुट्ने मधु घान हाल्ने, फिल्म नपाएपछि के गर्ने ?
कुनै समय यस्तो पनि थियो नायक राजेश हमाल एकदिन पनि फुर्सद भएको महशुस गर्न पाउँदैन थिए । एक चलचित्रको काम सकियो अर्को चलचित्रमा अनुबन्धित भइहाल्थे । त्यही व्यस्तताका बिच उनले दुईसय भन्दा बढी चलचित्रमा काम गरेको समेत पत्तो भएन । कति चलचित्र सफल भए त कतिले निर्मातालाई कंगाल मात्र बनाए । तर, नायक राजेश हमाल सधै हिट भईरहे । उनलाई आफनो चलचित्रमा लिनका ल...
चम्किला अनुहारको रिलको दुनियाँ जति चम्किलो देखिन्छ त्यहाँ भित्र भित्रै अध्याँरो हुने घटना धेरै पटक बाहिर आएका छन् । नेपालमा मात्र होइन बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरुले पनि आत्महत्या गरेर रंगिन दुनियाँको भ्रमलाई सतहमा ल्याइदिएका छन् । प्रत्यूषा बनर्जी हालै मात्र बलिउडमा चर्चित अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जीले आत्महत्या गरेकी छिन् । प्रेम जीवनमा समस्या ...
यो वर्ष विवाह गरेका चर्चित बलिउड अभिनेत्री (फिचर)
एजेन्सी । सन् २०१६ बलिउडमा अभिनेत्रीहरुका लागि विवाहकै वर्ष जस्तो भयो । किन भने चर्चित अभिनेत्रीहरुले यो वर्ष विवाह गरे । बलिउडमा राज गरेका चर्चित चर्चित अभिनेत्रीले यसै वर्ष वर पाए ।यो वर्ष विवाह गर्ने अधिकाँश अभिनेत्रीले ३५ काटिसकेका थिए । तर केही भने ३० काटेर विवाह गरेका छन् । कस कसले गरे यो वर्ष विवाहः १ प्रिती जिन्टाः चर्चित अभिनेत्री प्...
हास्य कलाकार दिपा श्री निरौलाले बिबाह नगर्नुको ठुलो रहस्य यस्ताे पाे रहेछ !